सन्ध्या र कुशलको वियोग गीत सार्वजनिक, निर्माण टिम मोफसलमाFilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
सन्ध्या र कुशलको वियोग गीत सार्वजनिक, निर्माण टिम मोफसलमा
फिल्मी फण्डा । आर के एम प्रोडक्सनमा ब्यानरमा तयार भएको फिल्म ह्याप्पी न्यू इयरको गीत सार्वजनिक भएको छ । काठमाडौंमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै फिल्मको स्याड गीत रिलिज गरिएको हो । गीतमा सन्ध्या के. सी, पुकार गौतम र कुसल थापालाई फिचरिङ गरिएको छ ।
त्रिकोणात्मक लब रहेको यस फिल्मलाई देव कुमार श्रेष्ठले निर्देशन गरेका हुन् भने फिल्ममा रोहन नेपालीको कोरियोग्रफी, नवराज बस्नेतको स्वर, विनोद ढकालको शब्द तथा संगीत रहेको छ । पौष १४ गते रिलिज हुने फिल्ममा सन्ध्या के. सी, पुकार गौतम, कुसल थापा लगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ ।
अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको छेको पारी रिलिज गर्न लागिएको यस फिल्मलाई लिएर नायक कुशल थापा र नायिका सन्ध्या के. सी उत्साहित भएका छन् । फिल्मको नाम ह्यापि न्यु ईयर नेपाली फिल्म हो तर अग्रेजी नयाँ बर्षको टाईटलसँग मिल्दो जुल्दो भएको कारण अग्रेजी नयाँ बर्षको छेकोमा रिलिज गर्न लागिएको कुशल थापाले बताएका छन् ।
फिल्मका टिम रिलिज मिती नजिकिदै गर्दा मोफसल यात्रामा निस्केका छन् । फिल्म प्रमोशनका लागि निर्माण टिम मोफसल लागेका हुन् ।